မြစ်ဆုံ: အသုံးတည်.မည်. FSCapture63 Portable (photo& video Recoder) software
အသုံးတည်.မည်. FSCapture63 Portable (photo& video Recoder) software
အသုံးဝင်သော ဆော.၀ဲလ်လေး တစ်ခု ပါ။ computer screen ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်နိုင်သလို မိမိပြုလုပ်နေသော အလုပ်များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ မှတ်တမ်းများ ကို video recoder လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ portable လေး ဖြစ်သဖြင်. စက်လေးမှာလည်း ပူစရာမလိုပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်မှာ စုစုပေါင်း 1.65 MB ဘဲ ရှိပါတယ်။
အသုံးပြုပုံမှာလည်း လွယ်ကူ ရှင်းလင်းပါ သည်။ မိတ်ဆွေများအား မူဗီ ဖိုင်လေးဖြင်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းပြ ခြင်သော သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမည်. software ပါ။ မရှိသေးသော သူများအတွက်ပါ။ အသုံးတည်.မည် လို. ယူဆပါတယ်။ အစ်ကို တစ်ယောက်ပို.ပေးထားသော ဆော.၀ဲလ်ကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမဆို ကြိုက်တဲ.နည်းလမ်းဖြင်. ပြန်လည်ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by မောင်မောင် at 16:55
ဒေါင်းလိုက်ပြီ အကိုရေ.. ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ
25 November 2011 at 17:49
26 November 2011 at 11:53
ကျမက7မဟုတ်ဘူး